Kedu ihe dị iche n’etiti DataNumen Outlook Repair na DataNumen Outlook Drive Recovery? - DataNumen
Nanị ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa abụọ a bụ na ha na-eji data data dị iche iche, dị ka ndị a:
· DataNumen Outlook Repair(DOLKR) na-ewe PST rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi dị ka isi iyi data.
· DataNumen Outlook Drive Recovery(DODR) na-ewere draịva ma ọ bụ diski dị ka isi iyi data. Mbanye ma ọ bụ diski bụ ebe ị debere faịlụ PST gị n'oge gara aga.
Yabụ ọ bụrụ na inwere PST mebiri emebi ma ọ bụ mebie faịlụ n'aka, mgbe ahụ ị nwere ike iji DOLKR iji rụkwaa faịlụ ahụ ma weghachite ozi ịntanetị n'ime faịlụ PST. Ọ bụrụ na DOLKR enweghị ike iweghachite ozi ịntanetị achọrọ, mgbe ahụ ị ka nwere ohere ịnweta ozi ịntanetị ndị a, site na iji DODR iji nyochaa draịva / diski ebe ị debere faịlụ PST n'oge gara aga.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweghị faịlụ PST n'aka, dịka ọmụmaatụ, ị na-edozi diski / draịva gị dum, ị ga-ewepụ faịlụ PST kpamkpam, ma ọ bụ diski diski / draịvụ gị agbajiri ma ị nweghị ike ịnweta faịlụ PST na ya, wdg. , mgbe ahụ ị nwere ike iji DODR ozugbo.
iche, diski, drive, ost, pst
Gini mere aru nke ufodu ozi ndi agbaghaghari efu?Kedu ihe dị iche n’etiti DataNumen Outlook Repair na DataNumen Exchange Recovery?